November 2018 – Page2– @mmunited
ဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော် စပြီးစာရေးတဲ့ အချိန်တုန်း ကရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ဘူး။ အခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်ရတဲ့ ပမာဏကများလာတော့ လူတွေစိတ်ဝင်စား လာကြဟန်တူပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေ နဲ့ကတော့ အီးစတင်း က ပိုအဆင် ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ စတင်းပရက်ကို သုံးဖို့ဆိုရင် ပထမဆုံး ဝက်ဆိုက်တစ်ခု ရှိရပါမယ်။ အဲ့ဒိ ဝက်ဆိုက်မှာ စတင်းပရက် ပလပ်အင် ကို ထည့်ရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပရိုက်ဗိတ် ပိုစ့်စတင်း ကီးကို ဆက်တင်မှာထည့်ရပါမယ်။ သူ့ အထဲ မှာတော့ ကိုယ်တွဲတင်တဲ့ တက် ကိုထည့် ပေးရပါမယ်။ အက္ခရာစဉ်အရ စဉ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာ တက်ကို ရှေ့ဆုံးက ထည့်ချင်ရင် မြန်မာ တက် တစ်ခုထဲကိုပဲ ထည့်ပေးရပါမယ်။ ကာတီဂိုရီကို လဲ မှန်အောင်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ …
Steemit မှာ ရက် ၁၂၀ ပြည့်ခဲ့ပြီ
ဘာလိုလိုနဲ့ Steemit ခရီးကိုစခဲ့တာရက် ၁၂၀ ပြည့်ခဲ့ပြီ။ SP ၅၀၀ ပြည့်ဖို့ ၄၈ SP ပဲလိုပါတော့တယ်။ နောက်တစ်လဆိုပြည့်မယ်လို့မှန်းထားပါတယ်။ ရှိတဲ့ Steem ကို ပါဝါအပ်လိုက်ရင်တော့ ခဏလေးနဲ့ပြည့်သွားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ စောင့်ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။ ငှားထားတဲ့ Sp တွေကလဲ ရှိနေသေးတယ် ဆိုတော့။ အခုလောလောဆယ်မှာ comment ပေးလို့မရတဲ့အတွက် engagement ပိုင်းမှာ အတော်အားနည်းသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စတင်းပရက်ဆီကနေ ရထားတဲ့ ပံ့ပိုးမှုကလဲ သိပ်တော့မဆိုးလှပါဘူး။ တစ်ရက်ကို ၂ SP လောက်တော့ တိုးပါတယ်။ ၂ SP ကသိပ်တော့ မသိသာလှပေမဲ့ မရတာနဲ့ စာရင်တော်ပါသေးတယ်။ ပိုစ့်တင်တာနဲ့ ဗုတ်ပေးတာကတော့ ပုံမှန်လုပ်သွားလို့ရပါတယ်။ အခြားသူတွေလိုပါပဲ ကျွန်တော့်ပိုစ့်ကို ဗုတ်ပေး ကွန့်မန့်ပေးရင် သဘောကျပါတယ်။ ကျွန်တော်ပိုစ့်တွေမှာ …
Monsters များရဲ့စွမ်းရည်များ ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပိုစ့်မှာ ကတိပေးခဲ့သလိုပဲ ဒီနေ့မှာတော့ monsters တွေရဲ့ စွမ်းရည်(ability)တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Monster တွေမှာ သူ့ရဲ့ level နဲ့လိုက်ပြီးတော့ စွမ်းရည်တွေရရှိပါတယ်။ လယ်ဗယ် အမြင့်ဆုံးမှာကတော့ သူ့ရဲ့ စွမ်းရည်တွေ အကုန်လုံးကို ရရှိပါတယ်။ အများဆုံးရနိုင်တာကတော့ စွမ်းရည် ၄ မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Angel of Light ဆိုရင် ပျံသန်းနိုင်စွမ်း၊ သူများကို သွေးပြန်ဖြည့်နိုင်စွမ်း၊ သူများကို အသက်ပြန်သွင်းနိုင်စွမ်းနဲ့ damage ကိုတိုးစေနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိပါသည်။ သူများကို အသက်ပြန်ရှင်စေတဲ့ စွမ်းရည်ကတော့ ဂိမ်းတစ်ခုလုံးမှာ သူမဆီမှာပဲရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော shield ပါ။ ပါဝင်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကို နှိုင်းယှဉ်ရင် အနီးကပ်နဲ့ အဝေးပစ်တွေက မှော်(magic သုံးတဲ့သူက ပိုများပါတယ်)။ Shield ကတော့ …
Opening second season rewarded packs ဒုတိယမြောကအအပတ်မှာတော့ ဘူစတာပက်စ် ဆယ်ခိုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒိဖွင့်လိုက်တဲ့ card တွေကို မပြခင်မှာတော့ အားကျစရာ သတင်းတစ်ခုကို ပြောပြပါ့မယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Lyanna nature ကဒ်ကို ၃၆ Steem နဲ့ရောင်းထုတ်လိုက်ပါပြီ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ wallet မှာ history ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယ ရာသီမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ကဒ်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Goblin Shaman2Giant Roc 1 Kobold Moner ` Fire Beetle 1 Cerberus2Pirate Captain3Spineback Turtle2Crustacean King3…
ဒီနေရာမှာ စည်းမျဉ်းလို့ပဲဘာသာပြန်လိုက်ပါ့မယ်။ ဂိမ်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေက နှစ်ရက်တစ်ခါလိုလိုပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဒါမှလဲ ကစားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိတော့ သူ့ရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအကြောင်းသိဖို့လိုလာပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိရသလောက်ကတော့ စည်းမျဉ်း ၅ ခုရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုမှတ်မိတာကတော့ သုံးခုလောက်ပဲရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ Standard, melee mayhem, Lost legendry တိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Standard ကတော့ ပုံမှန်ကစားသလိုပါပဲ ဘာစည်းမျဉ်းမှ မပါပါဘူး။ ဘာစည်းမျဉ်းမှမရှိတာကိုက စည်းမျဉ်းအချို့ရှိပါတယ်။ Melee ကောင်က ကိုယ့်အနားကပ်နေတဲ့ ရန်သူကိုပဲ တိုက်လို့ရပါတယ်။ Range ကောင်ကတော့ ကိုယ့်အဝေးက အကောင်ကိုပဲတိုက်လို့ရပါတယ်။ကိုယ့်အနားကပ်နေရင်တိုက်လို့မရပါဘူး။ Magic ကောင်ကတော့ နီးနီးဝေးဝေး တိုက်လို့ရပါတယ်။ Melee mayhem ကတော့ melee ကောင်က နီးနီဝေးဝေး ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိတိုက်လို့ရပါတယ်။ Lost legendry ဆိုတာကတော့ legendary …
contest steem steemmonsters steempress
This isacontest post supported by the contestkings. According to their rules there is no upvote, resteem and follow is needed. Only one comment is needed to participate in contest. What is the prize? I will write downalist of spare cards I have. I already reach certain level on this cards so …